Umfuziselo nineties, njengoba umthetho, baba baseYurophu. Kodwa shining Ngokwesibonelo kilomlayo isibe American udumo ngegama Christy Turlington. ubuhle Young owayehlala edolobheni elincane saseCalifornia, hhayi kuphela won uthando emhlabeni nokwamukela, kodwa futhi waba uphawu lokuhlala impumelelo, ikakhulukazi amantombazane nje, ngabe senginquma ukwenza ibhizinisi yokumodela.
Christie, yebo, kwaba isibonelo bonke onobuhle Wabasaqalayo. Lokhu ubuhle nezinwele ezimnyama, imilenze emide kanye sibalo ambiwa hhayi kuphela uphefumulela ngabalingisi ngendlela ebukeka ngayo, kodwa futhi kusinika ithemba lokuthi ukuthi kube nzima-sabasebenzi nabantu emgomweni wakho, konke kuyoba jikela phandle. Phela, supermodel abadumile - akusiwona kuphela ukubonakala, kodwa futhi ukusebenza, inkani, ukuphikelela, ikhono ukulandela imigomo yakho ngaphandle kuhlehla. Yilokho Christy Turlington futhi kuyehluka kuneminye izinkanyezi catwalks futhi umagazini ihlanganisa ukuthi ngempela kufanele nenhlonipho.
Iminyaka yokuqala yokuphila
Christie wazalwa yesibili ngoJanuwari 1969 edolobheni elincane eCalifornia. Yena kwakufanele 'odade ababili ngaphezulu. Nakuba esewusana, Christy Turlington wamangaza umsebenzi nomkhaya wakhe, akuzange kube nzima ukuba bahlanganyele ihhashi-ogibele futhi bahlanganyele ngempumelelo imincintiswano ehlukahlukene.
Kungani Christie isibe imodeli
Yiqiniso, indima ebalulekile i-career ye intombazane kudlalwa ukubukeka wakhe ongaphezu kovamile, ebukeka kahle. Christy Turlington (ukuphakama, isisindo, cishe ekahle imodeli - 177,8 cm kanye khilogremu amahlanu kuphela) idume zikanokusho brown izinwele nesimaragidu kwamehlo ayo. Le datha esihle zangaphandle, kodwa noma kunjalo kuba punchy nobunjalo okunenjongo benza Christie imodeli yimpumelelo. Nengabe hhayi ezikhuthele futhi ekhuthele, umsebenzi wakhe wayengeke aphumelele.
Ukuqala umgwaqo nzima
Lapho ngineminyaka engu-nane Christie abasha ahlinzekwa umsebenzi wakhe wokuqala ibhizinisi yokumodela. Akwaziwa ngesikhathi e Miami umthwebuli wabona izinkanyezi wekusasa ukusiza intombazane ngezinyathelo yakhe yokuqala waduma emhlabeni wonke. Ngisho nangaleso sikhathi, ukucinga indikimba yendaba yakhe yafakwa ezingcingo endawo, futhi cishe awekho imibukiso zendawo ayakhumuka ngaphandle iqhaza Turlington. Nakuba manje lisuke imodeli, bekungelona umsebenzi unomphela, yena moonlighted njengendlela.
Lapho ngineminyaka engu-eyishumi nesithupha Christie futhi nginenhlanhla, kwaba khona-ke, kungokufanelekile ukuba omunye New York ejensi nentshisekelo intombazane. Wayecele ukudubula, hhayi nje noma yikuphi, kodwa eFrance uqobo. Futhi lokhu ukuthatha isithombe, okuyinto kwaba yimpumelelo kakhulu, wanika abasha ubuhle udumo ngamazwe. Isethi iziphakamiso ngokubambisana wawela phezu Christy Turlington bafuna ukuqhuba omagazini owaziwa abanjenge-Elle, Bazaar Harper kanye nabanye abaningi.
Kuphela phezu kokufinyelela eminyakeni ewu nesishiyagalombili Christi eqala umsebenzi ngokugcwele njengesibonelo. Ukuphela Eighties kwekhulu lamashumi amabili wanika intombazane ithuba athole phezu isembozo salo magazini emhlabeni odumile Vogue. Ngokungangabazeki, lokhu kuyisinyathelo esikhulu empumelelweni, okuyinto kuvula amathuba futhi inikeza udumo emhlabeni wonke kwanoma iyiphi imodeli, ezovela ngamakhono abo. Kodwa kamuva usayine inkontileka yokukhangisa noCalvin Clein hhayi kuphela ukunyusele Christie njengesibonelo, kodwa futhi wabasiza kakhulu intombazanyana ngokwezimali: le ndlela iye yaba inzuzo kakhulu kuye.
Ngo nineties, impumelelo imodeli kwakungu ekhungathekisayo kangangokuthi ngisho Vogue ngo-1999 kwelinye editions zayo ngokuthi leggy Christi omunye onobuhle engcono - eyishumi eyinhloko zomculo.
Ukuphela umsebenzi model sika
Ulwazi emphilweni imodeli ethile yafeza indima ebalulekile. Maphakathi nawo-nineties abalandeli Turlington kwaba kakhulu badumazeke: intombazane wanquma uphumule kancane esithombeni amaseshini ukuthatha izifundo zabo sina. Kuye njalo efakiwe an efunwa angenakuvinjwa ulwazi.
Ngaleso sikhathi, ubuhle abasha akuyona wacabanga ukuthi imboni yezemfashini iye abe ngomsebenzi wakhe oyinhloko. Nokho, Christy Turlington ukwandisa ukubaluleka kwayo njengesibonelo akakwazanga ukumsiza kodwa jabulani. Noma kunjalo, wanquma ukuba bagxile ezifundweni zabo: wathi bafaka imibhalo kwelinye amanyuvesi e-New York. Christie wafunda esigcwele. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi izifundo ngemva kweminyaka emine. Njengoba waqaphela yena usaziwayo, kwaba inkathi engcono kakhulu yokuphila wakhe. Student neminyaka fun for everyone, cool kungakhathaliseki ukuthi.
Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili-okuhle ukumodeliswa umsebenzi yaphela nge Christy Turlington. Star biography akubandakanyi impumelelo okwengeziwe catwalks. Waba umklami Puma. Christie bukhicite imigqa eziningana zokugqoka le nkampani, njengoba unesibopho ukudalwa kanye nokuthuthukiswa izingubo yoga. Ngisho njengoba umqondisi wavakashela Turlington - ubaholele umsebenzi ku ifilimu documentary, okuyinto lanikezelwa kwabesifazane emazweni yezwe yesithathu. Ngosuku wokugubha wamashumi amane wokuphuma imodeli W yamjabulisa magazini Christie ukukhumbuza emhlabeni lihle ukumodeliswa umsebenzi walo. Ethandwa edition ecwebezelayo yanyatheliswa iqoqo impumelelo nezithombe athandwa Turlington.
Ukuphila kuyisipho umsebenzi
kwaba kanjani isiphetho Christy Turlington? Siqu ukuphila osaziwayo ngaphandle catwalks fashion athuthukile ngempumelelo. Wayengumngane angibi nesizungu. Kakade 2003, waya e-altare ne umlingisi umbhali Edward Burns. Ngaphambi kwalokhu isenzakalo esiyingqopha-mlando umbhangqwana ababengalazi nomunye kuphele iminyaka engaphezu kwemithathu. Ngokusobala, abathandi banquma ukungayisebenzisi nhlobo i igijimele ukushada, kodwa namanje Ezwa kumasha Mendelssohn ngalaba lucky. Ngokushesha uMbusi Onamandla ojabulayo abasanda kushada uvele nentombazanyana Umusa. Kodwa ingane omunye umbhangqwana akuyona wayeka: ngo-2006 indodana yabo wazalwa, owayebizwa ngokuthi uFinn.
Christie indaba, nakuba ungathandi inganekwane mayelana Cinderella, kodwa futhi okwaziyo charm iyiphi intombazane ofuna impumelelo empilweni, sithembele ngokwabo kuphela. Yiqiniso, akuzona zonke intombazane elula emzaneni omncane uzokwazi ukufeza yini eyenza Christy Turlington. Wakwazi ukuhlanganisa kahle futhi ukukhuphuka isitebhisi ukuze nezwe odumile, futhi lokuthola imfundo esezingeni elifanele, futhi ukudalwa i zemikhaya ezikahle. Ngokuqinisekile, le nguqulo supermodel has bakufunde. Kuyinto uyisibonelo esihle sokusilandela ngempela.
Suit zabesilisa lomshado: ingubo isudi, zakudala, Tuxedo
Indlela obolekisayo yenkampani